Aukey Portable Oriọna Oriọna [Nyocha] | Akụkọ akụrụngwa
Aukey obere bedside oriọna [AKVR]]
Karim Hmeidan | | Ngwa
Ofwa nke Ngwaọrụ na-atụ anyị n'anya karịa. Anyị nwere ọtụtụ ihe smart na / ma ọ bụ ikuku ngwaọrụ na-enyere anyị na-eme kwa ụbọchị. Site na elekere mkpuchi, ndị na-ehicha agụụ, na ngwa iji kwadebe anyị ka anyị wee sị ụbọchị ahụ. Taa, anyị ewetara gị ọhụrụ bedside table oriọna si Aukey, otu zuru okè oriọna anyị ịgụ abalị. Nọgide na-agụ na anyị na-enye gị nkọwa niile ...
Aukey mara maka ịme Ngwa nke ụdị ọ bụla, akara a ghọtara n'ọtụtụ ndị na-ekesa teknụzụ na nke a na-ewetara anyị a zuru okè obere bedside table oriọna na-enye a dị iche iche ikuku anyị abalị. Anyị kwesịrị kwụọ ụgwọ site na ọdụ USB-C na ọ na-ezobe otu akụkụ ya. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji ya ekwesighi itinye ya n'etiti 5 na 48 awa na-adabere n’oké ọkụ nke ìhè, ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ.
Maka ìhè nke ọ na-enwu, ihe kachasị adọrọ mmasị na oriọna, nwere ike ịkọwa ụlọ na enweghị nsogbu. Ee, ọ bụghị bọlbụ dị n'uko ụlọ ma ọ bụ oriọna a na-ejikarị enweta ya, mana n'ọchịchịrị gbara gburugburu ọ ga-enwu n'ime ụlọ ahụ ị nọ n'enweghị nsogbu.
Ihe kachasị mma bụ na arụmọrụ ya agaghị adị mfe. Na elu anyị na-ahụ a akụkụ ígwè nke na-emetụ ya aka ga-eme ka oriọna ahụ gbanye. Ijide ya, anyị ga-enweta ya Mee ka ìhè nke mere na ọ dabara mkpa anyị.
Na Na ala anyị na-ahụ a mode bọtịnụ ga-ekwe ka anyị «mmemme» ya nke mere na mgbe ịpịrị ya, ọ na-agbanye n'ọnọdụ ike kachasị dị ala, ike nke ga-eme ka anyị gụọ na-enweghị nsogbu onye anyị na ya bi. Anyị ga-ahụkwa ihe na-acha agba nke ga-enye anyị ohere ịgbanwe ụcha ọkụ n’etiti ọkụ na-ekpo ọkụ, ọkụ oyi, ma ọ bụ ụcha na-adịghị agwụ agwụ nke ahụ nwere ike ịdị iche.
Anyị agwaworị gị na ọ nweghị ihe ọ bụla iji dee n'ụlọ, mana n'otu oge ahụ Ọ bụ akụrụngwa nke anyị ga - eji kwa ụbọchị tupu ịrahụ ụra. Ọ bụrụ na ị na-achọ a vasatail bedside oriọna egbula oge inweta Aukey Isiokwu Oriọna. Have nwere ya dị na Amazon, maka Ọnụahịa 29,99 €, ya mere egbula oge na Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Aukey obere bedside oriọna [AKVR]]
Anyị nwalere igwe okwu Ikuku Ntị ọhụrụ nke Aukey [Nyocha]
Huawei chọrọ ịnọgide na-enwe ihe kachasị mma na-akpakọrịta na Mate X2 n'agbanyeghị Google